टोकियोको डिज्नी पार्कमा यी ११ टिप्स लिएर म्याजिकल समय बिताउनुहोस | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > HOW TO > टोकियोको डिज्नी पार्कमा यी ११ टिप्स लिएर म्याजिकल समय बिताउनुहोस
अनाहेइम, ओर्ल्याण्डो, टोकियो, पेरिस, हंगकंग, सांघाईको एउटा मिल्ने बिशेसता के होला भनेर प्रश्न गर्दा सबैको उत्तर एउटै आउदछ। त्यो हो यी सहरहरुमा रहेको डिज्नी पार्क। हुन पनि डिज्नीको आधिकारिक पार्कहरु विश्वको यी ६ सहरमा मात्र छ।
यी सहर मध्य टोकियोको डिज्नी पार्क निकै उच्च रेपुटेसन छ। डिज्नीको क्लासिक क्यारेक्टर र कथाहरु जापानमा पुन जन्मिएको भए ति कस्ता हुन्थे भनेर सोच्नु भएको छ ? जापान देश क्वालिटी संग निकै ब्याकुल रहेको देश हो। यो अर्थमा पनि यहाँको डिज्नी पार्क किन यति प्रशिद्द छ भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ।
ईतीहास र पुरस्कार
चीबामा रहेका यी दुइ डिज्नी पार्क(टोकियो डिज्नील्याण्ड र डिज्नी सी) द ओरिएण्टल ल्याण्ड कम्पनिको मातहतमा पर्दछ। टोकियो डिज्नी ल्याण्ड अमेरिका भन्दा बाहिर खुलेको पहिलो डिज्नी थिम पार्क हो। यो पार्क क्यालिफोर्निया डिज्नील्याण्ड र ओर्ल्याण्डो म्याजिक किङ्ग्डम पछि डिजाइन गरेको हो। १९८३ अप्रिल १५ बाट खुलेको यो पार्कले धेरै रेकर्ड राखेको छ भने थुप्रै पुरस्कारपनि पाएको छ। २०१३ मा यो पार्कले अमेरिकामा रहेको ओर्ल्याण्डोको म्याजिक किङ्ग्डम पछि सर्बाधिक मानिस घुम्न आएको थिम पार्कको उपाधि पाएको थियो। २००२मा अर्को पार्क डिज्नी सी खुलेको दुइ वार्समै यसले आफ्नो कन्सेप्टको लागि थिम इण्टर्टेन्मेण्ट एसोसिएसनबाट अवार्ड पाएको थियो।
टोकियो डिज्नील्याण्ड र टोकियो डिज्नी सी मा २०१८मा मात्र १ करोड ७९ लाख र १ करोड ४६ लाख मानिसले भ्रमण गरेका थिए। यसले यी दुई पार्कलाई विश्वको तेस्रो र चौथो धेरै भ्रम गरिएको थिम पार्क बनाएको थियो। आज हामी हजुरलाई यी ठाउ घुम्न जादा अपनाउनु पर्ने केहि टिप्सहरु बताउनेछौ।
1१) डिज्नील्याण्ड र डिज्नी सी को फरक थाहा पाउनुहोस
टोकियो डिज्नील्याण्डमा सात वटा थिम पार्क रहेका छन्। यी हुन् वर्ल्ड बजार, एडभेन्चरल्याण्ड, वेस्टर्नल्याण्ड, फ्यानटासील्याण्ड, टोमोरोल्यांड, क्रिटर कन्ट्री, अनि मिकिज टुन टाउन। धेरै भेराइटि र कार्टुन क्यारेक्टर भएर डिज्नी ल्याण्ड परिवार ग्रुप र स्कुल ट्रिपको लागि प्रसिद्ध छ। यो पार्कमा खालि ठाउ पनि धेरै भएकोले यहाँ मानिसको ठूलो भिड हुन सक्छ।
टोकियो डिज्नी सी भने धेरै जसो वयस्क, कपल, हाइ स्कुलका बिद्यार्थीहरु माझ लोकप्रिय छ। यसको कारण यहा भएको एक्स्प्लोरेसन थिमले गर्दा पनि हो। २०१९मा यो पार्कमा सात थिम एरिया रहेका छन जसलाई पोर्ट अफ कल पनि भनिन्छ। यी एरियाको नाम मेडिटेरानियन हार्बर, अमेरिकन वाटर फ्रन्ट, लस्ट रिभर डेल्टा, पोर्ट डिस्कोभरि, मर्मेड लागोन, अरेबियन कोस्ट र मिस्टेरियस आइल्याण्ड हुन्। डिज्नी सीको खासियत भनेको यसको शोहरु सबै लेकमा हुन्छ। त्यो भएर पनि हजुरले आफ्नो राइडको पर्खाइमा यो शो हेर्न पाउनु हुन्छ।
२) अग्रिम बुकिङ्ग गर्नुहोस
हरेक दिन पार्कको गेटमा टिकट किन्न सम्भव छ, तर यसको मतलब पार्क सुरु हुनुभन्दा अघि नै उठ्नु र अन्तमा टिकट किन्न लामो लाइनमा पर्खनु हो। छुट्टीमा कसैको लागि यो प्रक्रिया धेरै समय खपत हुने हुन सक्छ त्यसैले टोकियो डिज्नी रिसोर्टको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस् र तपाईंको तालिकामा फिट रहेको टिकट छनौट गर्नुहोस्।
टिकटहरू अवधि र उमेरको आधारमा धेरै फरक मूल्यहरूमा पाइन्छ, एक दिनको टिकटको मूल्य ७५०० येन हो। अप्रिलमा २०२० मा मूल्यहरु बढ्ने जनाइएको छ। अप्रिल देखि एक दिनको टिकटको ८२०० येन लाग्नेछ। यदि तपाईं डिज्नी पूरा दिन खर्च गर्ने योजना गर्नुहुन्न भने, “ आफ्टर सिक्स पासपोर्ट” सस्तो विकल्प हुनेछ। तपाई यो टिकट लिएर बेलुकाको ६ बजे पछि पार्कमा जान सक्नु हुनेछ।
थप रूपमा, तपाईं जापानको डिज्नी स्टोरहरूमा टिकट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, र सुविधा स्टोरहरूमा पनि! के तपाईंले ती हरियो मेशिनहरू फ्यामली मार्टमा देख्नु भएको छ (जापानको सब भन्दा ठूलो सुविधा स्टोर चेनहरू) जसमा ठूलो टचस्क्रिन र फोन जोडिएको हुन्छ?
यसलाई फ्यामि पोर्ट भनिन्छ। यो मेसिन बाट पनि सजिलै रुपमा टिकट किन्न सकिन्छ। झन् यसरि किन्दा हजुरले टि पोइण्ट पनि पाउन सक्नु हुनेछ
३) राम्रो समय छान्नुहोस्
टोकियो डिज्नील्याण्ड वा डिज्नी सी प्राय: बर्ष भरि व्यस्त हुन्छन्, तर त्यहाँ बर्षका विशेष समयहरू हुन्छन् जब पार्कहरू अत्यन्तै भीड हुन्छन् र लाइनमा धेरै समय खपत हुने गर्दछ। यद्यपि यो विशेष अवसरहरूमा सबै विशेष विषयवस्तुहरू र कार्यक्रमहरूको साथ धेरै रमाईलो हुन्छ, सप्ताहन्तमा, सार्वजनिक छुट्टिहरू, विशेष घटनाहरू (जस्तै: भ्यालेन्टाइन डे, क्रिसमस, नयाँ वर्षको पूर्व संध्या, गोल्डन वीक)मा पार्क भ्रमण गर्नु पूर्व विचार गर्नु आवश्यक कुरा हो, विशेष गरी यदि तपाइँ जापानको छोटो यात्रामा हुनुहुन्छ भने।
४) टोकियो डिज्नी रिसोर्ट लाइन
आफ्नो समयको बचत गर्न यो ट्रेन चढ्नु होस्। यो टोकियो डिज्नी रिसोर्ट लाईन एउटा मोनोरेल हो। यो ट्रेनले JR माईहामा स्टेसन र अन्य डिज्नी ल्याण्ड का ठाउहरुलाई जोड्ने काम गर्दछ। यो ट्रेन भित्रको डेकोरेसन पनि सिजन अनुसार फेरिन्छ। म अन्तिम चोटी क्रिसमसको समयमा गएको थिए। त्यो बेला ट्रेन भित्रको डेकोरेसन क्रिसमसको माहोलमा सजाईएको थियो।
टोकियो डिज्नी रिसोर्ट लाईन यति सुन्दर छ कि अमेरिकाबाट आउने डिज्नीका फ्यानहरु पनि आफ्नो देशको डिज्नीमा किन यस्तो मोनोरेल नभएको होला भनेर इर्श्या गर्दछन। यो ट्रेनको टिकटको मूल्य वयस्कलाई २६० र ११ वर्ष मुनिका बच्चाहरुलाई १३० येन पर्दछ। यदि हजुर यो ट्रेन दिनमा धेरै पटक चढ्नु हुनेछ बहने हज्जुर्ले एकदिनको पास पनि पाउनु हुनेछ। यसो गर्दा हजुरको पैसाको बचत हुनेछ।
५) आफ्नो घुम्ने तालिका टोकियो डिज्नी रिसोर्टको आधिकारिक मोबाइल एप्पबाट गर्नुहोस्
यदि हजुर जापानी पढ्न सक्नु हुनेछ भने यो एप्प निकै सहयोगी हुनेछ। यो एप्प केहि मिनेट मै डाउनलोड गरेर चलाउन सकिन्छ। तर यो जापानी भाषामा मात्र उपलब्ध छ र एप्प स्टोरको लोकेसन जापान बनाएपछि मात्र डाउनलोड गर्न मिल्छ। एक चोटी इन्स्टल गरेपछि हजुरले यो एप्प्मा शोको तालिका हेर्न सक्नु हुनेछ। तेसै गरि यो एप्पमा हजुरले परेडको बाकि रहेको सिटहरु पनि हेर्न सक्नु हुनेछ। यो एप्पको मदतले हजुरले आफ़ो कार्यतालिका अग्रिम योजना गर्न सक्नु हुनेछ।
६) डिज्नीको पपकर्न खानु होस्
लामो लाइनमा आफ्नो राईड पर्खिदा जो कोहिलाई पनि दिक्क लाग्छ। त्यसमाथि डिज्नी ल्याण्ड यति पपुलर छ कि यहाँ सधै भिड हुन्छ। त्यसैले हजुरले आफ्नो समयपपकर्न खाएर बिताउन सक्नु हुनेछ। टोकियो डिज्नीमा अनेकौ फ्लेभरको पपकर्न पाइन्छ। यहाँको लोकप्रिय भनेको क्यारामेल, हानी र सल्ट फ्लेभर हो। हजुरले यहाँ करी फ्लेभरको पपकर्न संग सगै सोय सास र बटर पपकर्न पनि पाइन्छ।
यो बाहेक पाइने कफी बकेट पनि निकै सुन्दर हुन्छ।
७) मनलागेको कोशेली वा चिनो लिनुहोस्
टोक्यो डिज्नी पसलहरुमा हरेक उमेर र अवसरको लागी स्मृति चिनो किन्न मिल्दछ। तपाईं डिज्नी थीम्ड मोबाइल स्ट्र्याप देखि चकलेट, टि कप, र कम्बल सम्म पाइन्छ। धेरैले पार्क छोड्नु अघि स्मारिकाहरू किन्न रुचाउँदछन् किनकि यसरी बोक्न सजिलो छ। जे होस्, यदि तपाईं सानो चिज लिन चाहनु हुन्छ (जस्तै झुम्का, फोन प्रोटेक्टरहरू, पर्स, आदि), हामी तपाईंलाई तपाईंको यात्राको सुरुमै शपिंग गर्न सिफारिस गर्छौं किनकि पार्क बन्द हुनु अघि कुनै पनि चीज किन्दा निकै भिड भएको अनुभव हुन सक्छ।
८) यहाको खाना सोचे भन्दा मिठो छ
तपाईंलाई थाहा छ अमेरिकामा म्याजिक किंगडमको रेष्टुरेन्टमा खादा हजुर यस्तो नराम्रो खानामा यति धेरै खर्च किन गरे होला भनेर सोच्न थाल्नु हुनेछ। तपाईं मूल रूपमा अमेरिकामा डिज्नीको मूल्यहरूमा म्याकडोनाल्डको गुणस्तरको भोजन खरीद गर्दै हुनुहुन्छ।
तर टोकियो डिज्नी रिसोर्टको खाना अरु देशको खाना भन्दा निकै स्तरिय हुन्छ। त्यो भएपछी हजुरलाई नराम्रो खानालाई थुप्रै पैसा तिरेको महसुस हुने छैन। त्यसमाथि दुवै पार्कमा थुप्रै किसिमका रेस्टुरेण्टहरु छन् जहाँ हजुर्ली निकै राम्रो कोर्स मिल पनि खान सक्नु हुनेछ।
पैसाको बचत गर्न खोज्नेहरु सानो क्याफे वा रेस्टुरेण्टमा पनि खान सक्नु हुनेछ। यस्ता सङ क्याफे पनि यहाँ थुप्रै छन्। त्यसमाथि आफ्नो समयको पनि बचत गर्न खोज्नेहरुले किओस्कमा स्न्याकहरु किनेर खान सक्नु हुनेछ।
९) डिज्नीको फास्ट पास लिनुहोस्
प्राथमिकता प्रणालीमा जस्तै, फास्ट पास टोकियो डिज्नी पार्कहरूमा पाईने सुविधाजनक नि:शुल्क सेवा हो। यसले आगन्तुकहरूको समय बचत गर्छ र उनीहरूलाई धेरै लोकप्रिय आकर्षणहरूमा अन्य पाहुनाहरूको तुलनामा “छिटो पास” गर्न प्राथमिकता प्रदान गर्दछ।
यसले कसरि काम गर्छ त ?
सबै आगन्तुकहरूले यो सेवा नि: शुल्क उपभोग गर्न सक्दछन्, तर सबै आकर्षणहरूको लागि उपलब्ध भने हुदैन। हजुरले एउटा थिममा एउटा फास्ट पास लिन सक्नु हुनेछ। तपाईं आकर्षणको प्रवेश द्वार नजिक उपलब्ध विशेष FASTPASS मेशिनमा टिकट स्क्यान गर्नुहोस्। तपाईंले त्यसपछि एक FASTPASS टिकट पाउनु हुनेछ। त्यसमा लेखिएको समय अवधि तपाईं (र तपाईंको समूह) को लागी आरक्षित हुन्छ। त्यस आकर्षणको लागि लाइनमा पर्खनुको सट्टा, तपाईले अन्य आकर्षणको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, खान सक्नुहुन्छ, वा स्मारिकाहरू खरीद गर्न सक्नु हुनेछ। आफ़्म्नो फास्ट पासको समय आए पछि, आकर्षणमा फर्कनुहोस्। स्टाफले तपाईंलाई विशेष FASTPASS लेनमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनेछ, जसले तपाईंलाई लामो पर्खाइको समयमा काट्न र छिटो सवारीको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईं पूहको हन्नी हन्ट चढ्न तिन घण्टाको लाइन बस्न पक्कै मन पराउनु हुन्न।
१०) डिज्नीको होटलमा बस्नु होस्
यदि हजुर डिज्नीको ठूलो फ्यान हुनुहुन्छ भने हजुरलाई डिज्नी होटल पनि निकै रमाइलो आकर्षण बन्न सक्दछ। यो होटलले हजुरलाई डिज्नीको जादुइ दुनियाको झझल्को दिनेछ। यी होटलमा सबैलाई मिल्ने खालको कोठा हुन्छ, बालक देखि उमेर ढल्केका सम्म।
डिज्नी रिसोर्टमा दुइ किसिमका होटल हुन्छन, सस्तो खालको लाई टोकियो डिज्नी सेलेब्रेसन होटल भनिन्छ अर्को भने डिलक्स खालको हो। डिलक्स होटलको तिन प्रकार छन्। ति हुन् टोकियो डिज्नील्याण्ड होटल, टोकियो डिज्नी सी मिरा कोस्टा, डिज्नी एम्बेसेडर होटल हो। यी होटलहरु भ्यालु टाईप भन्दा अलि महँगो हुन्छन। हैन हने हजुर अन्य पार्टनर होटलमा पनि बस्न सक्नु हुनेछ। धेरै जसो जापानीहरु अलिक दिनको बिदा हुने बेला केहि दिन होटलमा बसेर आनन्दले डिज्नील्याण्ड घुम्ने गर्दछन।
माथिका यी १० टिप्सहरु ध्यान पुराउनु भयो भने हजुरको डिज्नीको यात्रा निकै रमाइलो हुनेछ।